ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: လှချင်သလား အမိတို့
သိပ်ချစ်ရတဲ့ ယောက်ခမက အီးမေးလ်နဲ့ ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ဒီလက အမျိုးသမီးများ လ ဆိုပဲ။ မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာတတ်၊ သမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပြီး သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ မေမေ (ယောက်ခမ) ကို ဒီပို့စ်လေး နဲ့ပဲ ပြန်ပြီး ဂါရ၀ ပြုလိုက်ပါတယ်။ ငါးကြင်း ဆီနဲ့ ငါးကြင်း ကြော်တယ်လို့ ပြောရဘူးနော် မေမေ :)
The beauty ofawoman with time only grows.
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 1:45 AM
နောက်မှ ပညာပေး စာရေးဆရာတွေကို ငွေကြေးထောက်ပံ့နို်င်အောင် ကြံစည်ပါဦးမယ်။
Is that written by your mother in law?
မြတ်နိုးလဲ လှချင်တယ်နော်. ဟီးဟီး
ဘလော့ဖွင့်လိုက်ပါပီ ဆိုတာ အကြောင်းလာကြားတာပါ။